🥇 ▷ Sida loo beddelo lambarka sirta ah ee loogu talagalay 'Instagram' mobilada Android ✅
Sida loo beddelo lambarka sirta ah ee loogu talagalay ‘Instagram’ mobilada Android
Mid ka mid ah talooyinka ugu badan marka la maareeynayo sirtayada internetka waa taas Aynu ku badalno erayga sirta ah dhowr jeer. Ma u isticmaashaa isla xisaabtanada akoonkaaga Instagram waqti dheer? Haddii waqtigu yimid inuu ka beddelo mobiilkaaga, waxaan ku sharaxnaa sida loogu sameeyo dhowr tillaabo oo fudud.
Runtu waxay tahay inay jiraan xeelado badan oo lagu abuuro furayaasha sirta ah sida ay leeyihiin in kabadan laba iyo toban xaraf iyo isku darka xarfaha waaweyn, xarfaha yaryar, lambarro iyo astaamo. Intaa waxaa u dheer, waad u istcimaali kartaa maamulaha furaha si aad u abuurto, u isticmaasho una difaacdo furaha sirta ah. In kasta oo dhamaadka saadaalinta furayaasha la soo gaabiyo, Chrome for Android ayaa sidoo kale bilaabay in uu soo jeediyo furayaasha ammaan aad u sarreeya iyaga oo si aan kala sooc lahayn uga dhex abuuray.
Sida loo beddelo lambarka sirta ah ee loogu talagalay Instagram
Ka beddel lambarka sirta ah ee Instagram-ka mobiilkaaga Android waa a geedi socod aad u fudud Kuuma qaadaneyso wax kayar dhowr daqiiqo. Geedi socodka ayaa sidoo kale lagu samayn karaa nooca shabakadda shabakadda bulshada, in kasta oo aan diiradda saari doonno dalabka.
Marka, si aad uga bedesho erayga sirta ah ee barnaamijka ‘Instagram’, kaliya waa inaad raacdaa Tallaabooyinka xiga:
mid.Fur app-ka Instagram oo guji batoonka iyadoo la raacayo jajabka madoow ee geeska hoose ee midig si aad u gasho astaantaada.
laba.Guji saddexda sadarka toosan ee geeska kore ee sare.
3.Xulo xulashada ‘Settings’ ee aad ku arki doonto qeybta hoose ee shaashadda.
5.Xulo furaha sirta ah
6.Halkaas waa inaad ku qortaa eraygaaga sirta ah ee aad dooratid mid cusub, oo ay tahay inaad ku soo celiso mar kale si aad u hubiso inuu isku mid yahay oo aadan khalad sameynin markii aad gashid.
Haddii aad ilowdid furahaaga sirta ah, waxaad ku baddali kartaa Facebook. Si tan loo sameeyo, kaliya dhagsii isku xirka ka muuqda isla daaqadda si aad u beddelatid ereyga sirta ah.
Instagram-ka ayaa hubin doona inaad Facebook ku rakibtay moobaylkaaga iyo inaad horay u gashay barnaamijka. Waqtigaas, shaashad cusub ayaa furi doonta halka ay ku filnaan doonto taas Gali lambarkaaga sirta ah laba jeer.
La wadaag Sida loo beddelo lambarka sirta ah ee loogu talagalay Instagram taleefanka gacanta ee Android